Kusakhala ibhungane ezinkundleni yize ixegisiwe eyokhuvethe - Bayede News
Sekufanele ukuthi uHulumeni abuyekeze eyokuya kwabalandeli ezinkundleni
“Kubuhlungu ukuthi sekungokwesithathu kule sizini umdlalo omkhulu kangaka ngizowubukela kumabonakude. Kungani ngempela singabuyiselwa ezinkundleni, kube nesikalo esithize?”
Lawa ngamazwi ashiwo umlandeli wokuqina we-Orlando Pirates uMama uJoy Chauke ngeledlule ngesikhathi ngikhuluma naye ngaphambi komdlalo wePirates neKazier Chiefs obizwa ngeSoweto Derby obungeSonto.
Sekuwumlando ukuthi umdlalo ugcine unqotshwe iChiefs ngegoli elilodwa eqandeni elivalelwe phakathi uSamir Nurkovic.
Nami ngihlezi ngizibuza lo mbuzo ukuthi kungani ngempela bengabuyiselwa abalandeli ezinkundleni, kube nesibalo esithize sabalandeli kuye ngokuthi inkundla imumatha kangakanani?
Ngiyakuqonda ukuthi lusekhona ukhuvethe kodwa ngikholwa ukuthi njengoba uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa akwazi ukuvula izindawo zobumnandi waphinde wakhuphula isibalo sabantu abangakwazi ukuya emingcwabeni nasemcimbini wayengakwazi ukuthi “isibalo esithize singakwazi ukuba sezinkundleni”.
Ngiyasihlonipha kakhulu lesi sifo kodwa ngibona ukuthi bekumele kuthi kushaya lesi sikhathi babe sebekwazi ukuya ezinkundleni abalandeli kanye nabacosheli bezindaba.
Ukuhlonipha kwami lesi sifo ngithi angithi: “Bonke labo abadlule emhlabeni ngenxa yokhuvethe abalale ngoxolo. Kuthi labo abangakatheleleki baqhubeke nokulandela imiyalelo kaHulumeni.”
Le sizini yangowezi-2020/21 yeDStv Premiership iqale kamnandi kabi, ukube ibizokuba nabalandeli ibizoba mnandi kakhulu.
Njengoba nje amaqembu amaningi esalelwe imidlalo eli-10 ayabadinga abalandeli ikakhulukazi lawo aziwa ngokuthi mancane. Iqembu laKwaZulu-Natal iMaritzburg United bese lidume ngokuthi uma lisingethe umdlalo ngoLwesihlanu eHarry Gwala Stadium eMgungundlovu, kalukho olubuyayo. Lokho bekwenziwa ukuthi abalandeli bebegcwala bethi phama inkundla ibe luhlaza.
Kulesi sikhathi njengoba liseduzane nezembe akubuzwa ukuthi liyafisa yini ukuthi ngabe abalandeli bavumelekile ukuba sezinkundleni.
Ngempelasonto edlule bekuqopheka umlando iPirates neChiefs betholana emdlalweni weligi okwe-100. Ukuba bekwenzeka bekufanele kulo mdlalo abalandeli bagcwale inkundla kodwa-ke ngenxa yalesi sifo kuphoqe ukuthi kufakwe abambalwa ukukhombisa ukuthi lo mdlalo usho ukuthini.
AmaZulu FC yize enza kahle njengoba esendaweni yesihlanu kulogi, kodwa iqiniso lithi uma edlala enkundleni yawo iKings Park Stadium, eThekwini, asuke ebadinga kakhulu abalandeli. Ukwenza kahle ekhaya kuyinto ehlezi ifiswa amaqembu amaningi kwazise ukudlala ekuhambeni kuba nzima.
USuthu Queen, okungumlandeli wokuqina woSuthu, washo wathi yize lenza kahle iqembu kodwa liyadinga ukwesekwa futhi bakukhumbule ukubabukela eduze abadlali.
Emidlalweni eminingi yaphesheya kwezilwandle abalandeli babakhona ezinkundleni.
Ngaphandle kwebhola likanobhutshuzwayo emidlalweni yekhilikithi lapho kutholene phezulu i-India ne-England abalandeli bagcwala phama. Kule midlalo ngendlela okuyiyona kungathi kudlala iNdebe YoMhlaba.
Yize kungeke kusaba yile sizini kodwa uHulumeni akabheke ngeso elifanayo nelethu thina bathandi bezemidlalo lokuthi abalandeli babuyele ezinkundleni.
Uma kukwazi ukuthi kuvulelwe izindawo zobumnandi kungani kungavulwa ezinkundleni?
Kodwa yize bengekho abalandeli ezinkundleni, amaqembu adlala kahle kakhulu kunendlela enza ngayo ngesizini edlule isiphela.
Ngesizini edlule kwakukhombisa ukuthi awakwajwayeli amaqembu ukudlala ngaphandle kwabalandeli, imidlalo yayingabukeki nhlobo. Manje sekukhona ukuthi kudlala amaqembu asesigabeni esikhokhelwayo, ngesizini edlule bekungathi kudlala amaqembu amancane nje.
Ukubuya kwabalandeli ezinkundleni ngeke kusize kuphela amaqembu nabalandeli ukuthi bakwazi ukubukela imidlalo bukhoma, kodwa kuzosiza ukuthi laba abagada ezinkundleni babuyelwe imisebenzi yabo esinesikhathi esingaphezulu konyaka yaphela. Kusize nalabo ababhekelela izinkundla ukuthi kukwazi ukuthi kube khona okungenayo ngemali yamathikithi.